Nitondra sento, fitsipahana didim-pitsarana farany mihatra tamin’ilay jiolahin’ady Ratko Mladic fa tsy nampikatona ny raharaha · Global Voices teny Malagasy
Nanatanteraka fandripaham-bahoaka tao Eoropa taorian'ny-Ady-Lehibe-Faharoa ny tafik'i Mladic Mladic
Voadika ny 14 Jolay 2021 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Ελληνικά, English
Ratko Mladić, komandin'ny tafika Serba Bosnia taloha, notsaraina tao amin'ny ICTY tamin'ny Mey 2014. Saripika avy amin'i ICTY, CC BY 2.0.
Ny herinandro lasa teo [en] no nivoaka ny didim-pitsarana farany tamin'ny raharaha nanenjehana an'i Ratko Mladić, komandy Jeneraly ambony indrindra ao amin'ny tafiky ny Republika Srpska (VRS) – ny tafika Serba Bosniaka mpikomy. Niarahaba ity fanapahan-kevitra ity ny Bosniaka, no sady nanipika fa maro amin'ireo lasibatr'i Mladic no mbola tsy hita popoka sy tsy afa-nanaovana ny fandevenana sahaza azy. Any Serbia sy Republika Srpska, nahitana faratampom-pandavana mampanahy ny famaranana ny raharaha, izay tsy nanaovan'ny mpitantana mpandrendri-bahoaka fisamborana loatra.
Nampangain'ny Tribonaly momba ny Heloka bevava Iraisam-pirenena ho an'i Yogoslavia teo aloha – ICTY voalohany i Mladić tamin'ny volana jolay 1995, roa herinandro latsaka taorian'ny nanatanterahan'ny tafika eo ambany komandiny ny famonoana olona be indrindra teto amin'ny tany eoropeana hatramin'ny ady lehibe faharoa, taorian'ny fianjeran'ny “Faritra azo antoka” Firenena Mikambana tao Srebrenica.
Nandositra tamin'ny fomba ofisialy ny jeneraly Mladić nanomboka ny taona 1996, na izany aza dia narovan'ny tafika Serba Bosniaka sy ny sampam-piarovana ary ny tafika Yogoslavy tamin'izany fotoana izany sy ny sampam-piarovana tao aminy izy.
Afa-nivezivezy tamin-kahalalahana izy ary niaina fiainana ara-dalàna tany Serbia, farafaharatsiny talohan'ny nihonganan'i Slobodan Milošević, ary hita hatrany teo amin'ireo toby miaramila, anisan'izany i Topčider tanàna itatr'i Belgrade.
Tamin'ny 31 May 2011, dia naverina tany amin'ny ICTY i Mladić nony farany mba hotsaraina noho ny heloka bevava natao tany Bosnia sy Herzegovina.
Tamin'ny volana novambra 2017, voaheloka tamin'ny 10 tamin'ireo fiampangana 11 tany am-boalohany izy, anisan'izany ny fandripahana tany Srebrenica, famongorana ireo tsy Serba, famonoana olona, ​​fanenjehana sy fampodiana ireo olon-tsotra tsy Serba nanerana an'i Bosnia sy Herzegovina, fanafihana tsy ara-dalàna natao tamin'ny sivily sy ny fampihorohoroana, ho an'ny Fanentanana nataon'ny VRS amin'ny tifitra miafina sy fanapoahana baomba an'i Sarajevo ary koa fakana takalon'aina, ao anatin'izany ny mpiasan'ny Firenena Mikambana any Bosnia sy Herzegovina.
Nitsahatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny desambra 2017 ny ICTY, ka eo ambany fahefan'ny rafitra iray mpandimby, ny International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) ny asany sisa tavela, toy ny fanaraha-maso ireo sazy sy ny fandinihana ny fizotran'ny fampiakarana raharaha.
Tamin'ny 8 Jona, dia nolavin'ny IRMCT ny fampiakarana fitsarana ambony nataon'i Mladić manohitra ny fanamelohana noho ny fandripahana olona sy ny heloka bevava atao amin'ny olombelona, ​​midika izany fa mety handany ny androm-piainany sisa any am-ponja ity 78 taona ity.
Anisan'ireo mpitarika nankasitraka ny fanamafisana ny didim-pitsarana an'i Mladić tany am-piandohana ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden, ny Sekreteran'ny Raharaham-bahinin'ny Firenena Mitambatra (Britanika) Dominic Raab ary ny sekretera jeneralin'ny ONU António Guterres.
Nilaza ny mpanolotsaina manokanan'ny sekretera jeneraly misahana ny fisorohana ny fandripahana, Alice Wairimu Nderitu hoe:
Manome antoka (fisiana) ara-tantara sy fiafaran-tantara ho an'ireo niharam-boina sy ireo niangana ny fanapaha-kevitra hitazona ny fanamelohan'ny tribonaly iraisam-pirenena misahana an'i Yogoslavia teo aloha ahatra amin'i Mladić, sy ny fanamelohana azy higadra mandra-pahafatiny, … Mandefa hafatra tena lehibe koa izany manerana ny Balkans Andrefana izay ahitantsika ny fandavana fisian'ny fandripahana sy ny fanomezam-boninahitra ireo mpamono olona voaheloka toa an'i Mladić izay tsy misarangotra fotsiny fa mitombo ihany koa.
Fanapahan-kevitra mampizarazara an'i Balkana
Afa-po tamin'ny fanapahan-kevitra ireo mpikatroka sy FTMF misolo tena ireo sisa velona sy ny havany tany Bosnia sy Herzegovina. Nilaza ilay mpikatroka avy any Tuzla ao amin'ny fikambanana Women of Srebrenica fa na dia faly tamin'ny didim-pitsarana aza izy ireo, dia tsy misy afaka mamerina ny vady aman-janany, ny rahalahiny ary ny rainy.
“Raha nanana ny maha olona izy dia tsy mba natory am-pilaminana, fa tokony niaiky ny fandripahana nataony ary nifona,” hoy i Vasvija Kadić tamin'i Klix.ba.
Nanondro ny zava-misy ihany koa ireo sisa niangana fa mbola tsy mitsahatra ny fisian'ny famonoana ao amin'ireo toerana nanaovana izany ary tsy mbola voaisa ireo lasibatra an'arivony mahery.
Betsaka ireo sisa velona sy ny havany mbola miandry handevina ny fatin'ireo hava-tiany.
Betsaka ireo niangana nivory tao amin'ny foibem-pahatsiarovana tao Potočari mba hanatrika ny didim-pitsarana farany. Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny iray tamin'izy ireo fa manantena ny fanamafisana ny fanamelohana izy ireo saingy efa ela loatra vao nitondra an'i Mladić tany amin'ny fitsarana.
Efa nanantena ity didim-pitsarana ity izahay, saingy mieritreritra fa tara loatra amin'izao. Tokony efa ela no voaheloka i Mladić, saingy manantena hatrany izahay ary manantena fa hisy ny rariny.
Nasehon'ny didim-pitsarana indray miorim-paka ao Serbia sy ny ampahany amin'ny faritra ao Bosnia sy Herzegovina izay nijaly indrindra tamin'ny fanafihan'i Mladić – Republika Srpska, ny kolontsain'ny fandavana.
Ao Trebinje, Bosnia sy Herzegovina atsinanana, nipoitra ny afisy lehibe misy ny sarin'i Mladić sy soratra hoe “Maherifo!” taorian'ny didim-pitsarana.
Ny iray hafa kosa niakatra tao amin'ny viaduc (tetezana avobe) ao Banja Luka nanambara hoe: “Tsy raharahanay ny didim-pitsarana avy any La Haye izahay, ianao no maherifo ao amin'i Repoblika Serba.”
Nilaza ny mpitarika Serba Bosniaka amin'izao fotoana izao, Milorad Dodik, fa meloka amin'ny “fitanilàn'ny fitsarana” ny ICTY.
Trobojka s Mladićevim likom i natpisom “Heroj” osvanula na zidinama u Trebinju https://t.co/0VibEnbwMR pic.twitter.com/bYOtV65mFL
Napetraka ao amin'ny rindrin'ny trano mimandan'ny Tanàna Taloha ao Trebinje ny sainam-pirenena miloko Telo [Serba] ahitana ny sarin'i Mladić sy ny teny hoe “Maherifo!”
Nidera an'i Mladić ho maherifo Serba ireo gazety mpanaitaitra mpomba ny governemanta any Serbia ary nilaza fa voaheloka izy “na dia tsy misy porofo mamely azy aza.” Ny sasany niantso azy hoe “be herim-po sy mafy loha”, ary nanondro ny fitsarana ho tsy rariny lehibe.
Pejy voalohany amin'ny tabloida [gazety mpanaitaitra] Serba taorian'ny didim-pitsarana farany ho an'i Ratko Mladić. Objektiv: “Tsiambaratelon'ny peratr'i Mladić: Herim-po sy Fihaikàna”; Kurir: “Ny tsy rariny tany La Haye ho an'i Mladić, nohamafisina ny sazy mandra-pahafatiny: Aza mikasika ny ratranay velona! Matin'ny alahelo ireo havany”; Informero: “Very maina ireo didim-pitsarana rehetra tany La Haye: Maherifo Serba mandrakizay i Mladić!”. Fampiasana araka ny mety.
Somary malina kokoa saingy tsy nampahery ireo fanehoan-kevitra ofisialy tao Belgrade. Ny praiminisitra Ana Brnabić nilaza fa tsy misy isalasalana fa “fitsarana politika” tsy tia Serba ny tribonaly iraisampirenena ho an'i Yogoslavia teo aloha.
Aleksandar Vulin, minisitra malaza ao amin'ny governemanta Serba Aleksandar Vučić, nilaza fa tsy fitsarana no anton'ny didim-pitsarana fa «valifaty».
Betsaka no nanipika fa mpanohana mavitrika an'i Ratko Mladić i Vučić tenany.
Eny tokoa, efa nanambara i Vučić fa trano azo antoka ho an'i Mladić sy ilay meloka an'ady Serba Bosniaka iray hafa Radovan Karadžić ny Antenimiera Serba
Nandefa sora-baventy koa izy teny amin'ny Lalambe Zoran đinđić (nomena ny anaran'ny praiminisitra Serba sy mpanohitra an'i Milošević novonoina tamin'ny taona 2003) izay mivaky hoe: “Lalambe Ratko Mladić.”
. https://t.co/TZLXOBGegC pic.twitter.com/wJ3UAhLufY
Aza adino, tamin'ny taona 2007 dia nidera an'i Ratko Mladic i Vucic. Tsy niova ny zava-misy, tsy nisy tsiambaratelo momba ny heloka bevava nataon'i Mladic. Nanohana azy i Vucic NOHO NY heloka vitany. Ny niova dia ny hirika ho an'i Vucic.
[Ao amin'ny sary, ny solombavambahoaka tamin'izany Vučić mitazona sora-baventy “Trano azo antoka ho an'i Ratko Mladić” ao amin'ny parlemanta Serba.] [In the photo, then-MP Vučić is holding a sign “Safe house for Ratko Mladić” in Serbian parliament.]
Nanoratra i Filip Švam, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Vreme, gazety mahaleo tena mpivoaka isan-kerinandro avy any Belgrade fa na eo aza ny propagandy mankalaza azy, milaza fa tsy hitolo-batana amin'ny polisy izy, fa ho faty maritiora kosa, niharan'ny fisamborana feno herisetra tao amin'ny fihinanam-bilona fananan'ny havany any amin'ny tanàna lavitra any Lazarevo i Mladić.
Od tada Mladić jedva da ikog zanima. Javno mnenje se prema njemu odnosi gotovo kao da nikad nije postojao. Ali, ne treba brzati sa zaključcima. Sasvim je moguća njegova puzeća rehabilitacija u “srpskom svetu” kroz osporavanje Haškog suda, podizanja tenzija u regionu, besramno laganje, vađenje iz konteksta… Mada mnogo manje nego što je želeo, Mladiću je ostalo dovoljno saučesnika i obožavalaca. I što je još važnije, na jakim su mestima. Motiv im je snažan: relativizujući njegovu ulogu devedesetih, relativiziraju i svoju…
Nanomboka teo dia vitsy dia vitsy ny olona liana tamin'i Mladić. Raisin'ny hevi-bahoaka ho tsy nisy velively izy. Saingy, tsy tokony hitsambikina hanao fehin-kevitra isika. Azo atao tokoa ny fanarenana [maharikoriko] azy amin'ny laoniny amin'ny “tontolo Serba”, amin'ny alàlan'ny fiadiana amin'ny fanomezam-pitokisana ny tribonalin'i La Haye, mampitombo ny fifanenjanana ao amin'ny faritra, ny lainga tsy mahalala henatra, ny fandraisana hevitra mivaona… Na dia vitsy tsy araka ny niriany aza ireo, mbola mihoatra noho ny ampy ny mpiray tsikombakomba sy mpankafy an'i Mladić. Ankoatra izany, mitàna toerana ambony izy ireo amin'izao fotoana izao. Mahery vaika ny antony manosika azy ireo: amin'ny fanamaivanana ny andraikiny nandritra ny taompolo 1990, manamaivana ny azy ireo manokana ihany koa izy ireo …